Suudaaniyaddii soo luntay! (W/Q Maxamed Cabdullahi Dhaaley) – IFIYE
Waxa ay isweyddiinaysaa haddii ay caawa ku laabato gurigeeda sida uu noqon doono dareenka qoyskeeda. Waxa ay hubtaa in ay ilmaheedi goorahaanba ka walwalsan yihiin xaalka ay iyadu ku sugan tahay. Iyada iyo allaheeda mooyee, cid kale oo geeri iyo nolol wax ay ku sugan tahay og ma jirto. Sidaas oo ay tahayna, wixii ay dhib soo martay waxa ay isku illowsiinaysaa in ay haddaba u fadhido sugitaanka diyaaraddii dib ugu celin lahayd qoyskeeda.Magaaladan ay hadda ka tegeyso waxa ay u leedahay xasuus aanay weligeed illoobi doonin. Waa magaalo ay maqal mooyee aanay marnaba ku fekerin in ay maalin uun muuqaal ku arki doonto. Waxaase soo gacma-xiray waqtiga, oo iyada oo aan ku talogelin ka soo dejiyay halkan.
Inta ay waqtiga sidan u galay cannaananayso in ka badan waxa ay cannaananaysaa kuwii u sababta ahaa in ay halkan timmaaddo. Erayo aan hubo in ay qalbi murugeysan ka soo baxeen ayaa ay ku tiri “Sucuudiyaanku waa gaalo seef lagu soo islaamiyay, weligoodna arxan laga sugi maayo!”
Saddex maalin ka hor ayaa ay soo raacday dayuurad ka soo kacaysay Jeddah. Soo ma ay raacin e, waa la soo raaciyay. Waa Suudaaniyad da’da lixdameeyada ku jirta, oo halkaas ugu noolayd in ay ka xoogsato. Sucuudiguse, waa dalka qof in uu musqul galo isku diyaariyay la soo tarxiillo isaga oo labadiisii kabood aan weli gashan.
Xitaa Tetelfoonkeedii iyada oo aan wadan ayaa ay askarta Tarxiilku soo qabteen,waxaana ay kama’ ama ula-kac tii ay ahaataba ku soo tuureen diyaarad u socotay jiho ka duwan halkii ay iyadu doonaysay oo dalkeeda ah.
Markii ay diyaaraddu hawada ku soo jirtay waqti khiyaas ahaan ka badan inta ay qaataan duulimaadyada u dhexeeya Jeddah iyo Khartoum, ayaa ay maama Kaltuum ka shakisay halka loo wado, ilbaxnimo-yarida dhoofka iyo waayeelnimada oo isugu tagtay ayaase u suurtagelin waayay in ay wax badan ka sii ogaato halka ay ku sii socoto. Markii ugu horreysay ee ay xogta arrintaas ku saabsan heshayna waa mar ay diyaaraddii soo caga-dhigatay halkii ay beegsanaysay, ka dibna socotadii ay Kaltuum ku jirtay dhulka u soo degeen.
“Waxa aan arkay dad ku hadlaya af aanan weligay anigu maqal. Waa dad aan waxba ka garanayn af-carabiga” ayaa ay tiri Kaltuum.
Waxa ay sii raacisay “aabbahay iyo hooyaday oo dhintay xitaa uguma aanan ooyin sida aan u ooyay markii la ii sheegay in meesha aan joogo ay tahay meel magaceeda la yiraa ‘Soomaaliya’ ”.
Kaltuum oo aan kula sheekaystay garoonka Aadan-cadde, mar aan iyada iyo aniguba halkaas ku sugeynay duulimaad aan Xamar uga soo baxaynay, ayaa waxa ay xasuusatay sida ay oohinta iyo walwalka ugu sii xoogaysanayeen mar kasta oo ay aragto dadka hareeraheeda marayay oo iyaga uun sheekaysanaya, iyaduna aanay afkooda waxba ka fahmayn, cid dhankeeda u soo jeesanaysana aanay jirin. “Waxaan isweyddiiyay xaggee biyo ka cabi doontaa? Gurigee raashin ka cuni doontaa? Yaad la sheekaysan doontaa? Halkan sidee ugu noolaan doontaa adiga oo aan garanayn afkan ay dadku ku hadlayaan” ayaa ay tiri.
Mar dambe ayaa waxa ay heshay nin afka carabiga garanaya, kaas oo gurigiisa geeyay, ka dibna ku xiray safaaradda Suudaan ee Xamar, oo iyadana u soo dhammeystirtay howsha socdaalkeeda ay dib ugaga baxayso dalkan ay ku soo ambatay.
Waxa aan weyddiiyay waxa ay Xamar ku aragtay, waxaana ay si dhaqsa ah iigu warcelisay “dad wanaagsan ayaa jooga, laakiin dhibka waxaa waaye; biyaha ay cabayaan oo dhannaan ah, afcarabigana ma yaqaanaan!”
W/Q:- Maxamed Cabdullahi Dhaaley